Ụbọchị My Pet » 6 Ajụjụ di na nwunye kwesịrị ịtụle Tupu Inweta A Pet
Da ya: Ị chọpụtara na pụrụ iche mmadụ, na mmekọrịta gị bụ kediegwu. Ma gịnị ka ị na-eme mgbe gị ịrịba ama ndị ọzọ na-atụ aro na-ewere itu na-eme a nkwa na onye ọ bụla ọzọ…site na a Pita? Tupu ị gbakwunye na ọhụrụ nkịta ma ọ bụ cat gị ndụ, tụlee idebe ajụjụ n'uche.
"Unu na anyị abụọ na-achọ a Pita?"
Inwe anụmanụ na ndụ gị nwere ike ịbụ a na-akwụghachi ụgwọ na ndụ-ekwu ahụmahụ. Ọ nwekwara ike ịbụ oké ọnụ ma na-ewe oge, na ASPCA estimating a na-ajụ-sized nkịta ike na-eri nkezi nke $1,580 kwa afọ maka nri, unọ unam usọbọ mmefu, na ndị ọzọ na-elekọta, mgbe a cat ike na-eri nkezi nke $1,035 kwa afọ. The mkpebi na-a Pita kwesịrị ibe, na a ga-ogologo oge tupu ị na-tinye a nkịta, pusi, ma ọ bụ anụ ọzọ na ndụ gị. Buru n'uche gị ịrịba ama ndị ọzọ nwere ike na-ala azụ nwere a Pita; ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, mgbe ahụ na-akwanyere ha chere na ihe na-ejide oyi na-eweta n'ụlọ a ọhụrụ anụmanụ. Ọ bụrụ na ma nke ị ugbua nwere a Pita, mgbe ahụ i kwesịrị ịtụle gị anụmanụ mkpa mgbe na-eme mkpebi.
"Olee ụdị Pita bụ nri maka anyị?"
Ọ bụrụ na ị na-gbatawala Saturday ụtụtụ jogs n'ime ogige na a Labrador, ma gị ịrịba ama ndị ọzọ na-eche nke stocking a oke tank na azu, mgbe ahụ na ị chọrọ ikwu banyere ụdị anụmanụ unu abụọ chọrọ. Were n'ime akaụntụ ọ bụla allergies gị ma ọ bụ ịrịba ama ndị ọzọ nwere, nke gị ugbu a ndụ ohere, ọrụ gị schedules, na ego mgbe na-ekpebi na a Pita. Jiri ohere a-atụle nke nke Pita na ị chọrọ, kwa. A ibu nkịta wee chee ihe ịma aka na-emefu karịa a obere n'apata nkịta.
"Olee otú ọtụtụ anu ulo-eme na anyị chọrọ, agbanyeghị?"
Ezie na gị na ịrịba ama ndị ọzọ nwere ike kwetara na ụdị anụmanụ na ị chọrọ, dịkwa mkpa ka ị na-ekweta na ole anu ulo na ị chọrọ. Na onye ọ bụla ọzọ Pita, ọrụ gị na-akwụ ụgwọ ndị metụtara ilekọta ụmụ anụmanụ ga-amụba. Buru n'uche ọ bụla iwu na ụkpụrụ na ike ide na okwu nke otú ọtụtụ ụmụ anụmanụ na i nwere ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ na a mgbazinye.
"Olee ebe a ga-ahụrụ n'anya ndụ?"
N'ihi na di na nwunye ụfọdụ, biri abụghị otu nhọrọ maka ọtụtụ ihe mere. Ọ bụrụ na gị ịrịba ama ndị ọzọ na-adịghị ebi ndụ ọnụ, mgbe ahụ ị chọrọ ikpebi ebe Fido ma ọ bụ N'ụbọchị nke abụọ ga-ebi. Ọmụmaatụ, ị ga-ekpebi na-gị Pita na onye gị na n'ụlọ n'izu, mgbe unu nwere Pita na izu ụka? Mgbe ị na-ekpebi na ndokwa, ihe na-arụ ọrụ gị schedules na ugbu a ụlọ ma ọ bụ na ulo.
"Ònye bụ maka Pita elekọta?"
Ọ bụrụ na gị ịrịba ama ndị ọzọ routinely kewaa mmefu, mgbe ahụ ị na-ekpebi bụ maka Pita na-elekọta nwere ike moot. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-eme ọ bụghị mgbe niile evenly kewaa mmefu, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na otu onye n'ime unu na-eme ka budata karịa ndị ọzọ, -ekpebi onye ga-akwụ ụgwọ maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ego na Pita nri bụ mkparịta ụka ị kwesịrị ị nwere na gị ịrịba ama ndị ọzọ n'ihu gị-eme n'ụlọ a ọhụrụ cat ma ọ bụ na nkịta.
"Olee ebe anyị ga-a Pita?"
Gị na onye òtù ọlụlụ nwere ike kwetara na na-otu ụdị Pita. Ma, ebe ị ga-ahụ gị ọhụrụ nkịta, pusi, ma ọ bụ hamster? Ikekwe otu nke ị nwere ike obi banyere anu ulo zụtara si a ahịa ma ọ bụ breeder. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, na ị ma mkpa ịnọ na osisi na-ekweta na banyere ebe ị pụrụ ịchọta anụmanụ.
Inwe ihe emeghe nkwurịta okwu gị na ịrịba ama ndị ọzọ banyere ụdị na otú ọtụtụ ụmụ anụmanụ bụ ihe dị mkpa na mmekọrịta gị. Cheta-eme ihe n'eziokwu na akpọrọ onye ọ bụla ọzọ echiche.